Uphuhliso lobugcisa - SBAfrikaans
Kufundiswa abafundi abangalifumaniyo ithuba lokubona imidlalo yeqonga kwaye balungiselelwa ukuthabatha inxaxheba kwi-kykNET National Acting Competition.
UKUBUKELA IMIDLALO YEQONGA E-THEATRE:
Abafundi bamabanga asezantsi naphakamileyo bafumana ithuba lokubukela imidlalo yeqonga ngokuziqhelanisa nale mizi yemidlalo yeqonga, ukufunda nokufumana inkxaso ekufundeni. Kuye kutsoliswe nakukhubazeko ngoba kuye kubonelelwe nangeetoliki zolwimi lwezandla kwakunye nezitulo ezenzelwe abangakwaziyo ukuhamba.
Lo ngumyadala womculo apho kukho iikwayala ezicula ngesi-Afrikaans kwaye kuxutywe nezo zicula ngezinye iilwimi zalapha eMzantsi Afrika. Ezi kwayala ziphuma kwiinkalo ngeenkalo. Zichongiwe. Zinezingqi ezahlukileyo yaye zicula iintlobo ezahlukileyo zomculo.
Lo ngumyadala womculo apho kukho iikwayala ezicula ngesi-Afrikaans kwaye kuxutywe nezo zicula ngezinye iilwimi zalapha eMzantsi Afrika. Ezi kwayala ziphuma kwiinkalo ngeenkalo. Zichongiwe. Zinezingqi ezahlukileyo yaye zicula iintlobo ezahlukileyo zomculo, iyileyo inengxam yayo emalunga nolutsha noomama bamandulo, ngeli thuba kuza kube kujoliswe kulwimi lwasekhaya ngo-2021. Kulo nyaka ka-2019, bekutsoliswe kwinyanga kaNovemba eyaziwa njenge-Movember yaye ibinamazwi wamadoda kuphela ngoba injongo ibi kukukhanyisela uluntu ngomhlaza wamalungu angasese wobudoda.
Yaqalwa ukukhutshwa ukusukela ngo-2018 kubafundi abathatha inxaxheba kukhuphiswano lwe-kykNET National Acting Competition.
USUKU LOKUTYA KWILIZWE LONKE:
YNgokusebenzisana neSebe Lezolimo laseNtshona Koloni, umdlalo omalunga nokubaluleka kokutya okukhuselekileyo uzakuboniswa kwaye kukho neencwadi zamabali eziza kunikwa abafundi.